Ukwenziwa kwenkqubo yokuqinisa inkqubo yentsimbi
Ikhaya / izicelo / Ukukhutshwa ngokukhawuleza / Ukwenziwa kobuso bokomelela intsimbi
Udidi: Ukukhutshwa ngokukhawuleza tags: thenga umatshini onzima wokungenisa, ukuqina kokulinganisa, Ukuqinisa intsimbi, Ukuqinisa isinyithi sokufaka i-heater, ukuqina intsimbi komhlaba efanelekileyo, IH intsimbi kufaneleka, ukunyanzeliswa, induction ukuqina kufanelekile, induction Ukuqinisa ixabiso lomatshini, induction ukuqina kobuso, ukuqina komphezulu, Umphezulu Ukuqinisa intsimbi kufaneleka
Induction Surface Ukuqinisa intsimbi ukuya kwi-1600 ºF (871 ºC) yesicelo esomeleleyo
I-Induction Surface yokuqinisa intsimbi ukulungiselela umatshini weenxalenye zomatshini kuhlala kwenziwa ngobushushu.
Material: izixhobo zentsimbi (0.75 ”/ 19mm ubukhulu)
Rhoqo: I-368 kHz
-Inkqubo ye-DW-UHF-10kW yokufudumeza indawo ifakwe kwisikhululo sobushushu esikude esiqukethe ii-1.0 μF ezimbini
-I-co-pancake helical induction coil coil yenzelwe kwaye yaphuhliswa ngokukodwa kwesi sicelo
The ukucwangcisa ukukhenketha kwecoil design lenze ukuba icandelo likhuliselwe kwikhoyili yokufudumeza ukusuka ezantsi. Uyilo lwenzelwa ukuba luqinisekise ukuba luya kusebenza kakuhle ngaphakathi kokuseta kwabathengi ngoku. Uvavanyo lokuqala lwenzeka ngeepeyinti ezibonisa ubushushu ukuvavanya ukufana kwendlela yokufudumeza kunye nesantya sokufudumeza. Ngendlela elungileyo yokufudumeza efezekisiweyo, iisampulu zacutshungulwa ngexesha lekhefu le-1.0, 1.25 kunye ne-1.5 imizuzwana. Iisampulu zaphoswa kwindawo yokucima amanzi emva kokufudumeza ukugqiba inkqubo yokuqinisa.
Isantya: Ukulungela ukufudunyezwa kakuhle phantsi kwemizuzwana emibini
Ukusebenza ngokuchanekileyo: Ukwenziwa kusetyenziswa amandla amancinci kuneendlela zokufudumeza ezinokhuphiswano
Ubungqina benyawo / uyilo: Ukutshisa ukutshisa inokumiliselwa ngelixa uthatha indawo yomgangatho ophantsi, kunye noyilo lwekhoyili lungena ngaphakathi kulungiselelo lokusebenza lomthengi